Ady amin’ny kolikoly: mitarazoka ny fanendrena ny tale jeneralin’ny Bianco - ewa.mg
News - Ady amin’ny kolikoly: mitarazoka ny fanendrena ny tale jeneralin’ny Bianco
Tsy mazava ny antony mampihisatra. Banga efa ho iray volana izao ny toeran’ny tale jeneralin’ny Bianco. Tapitra tamin’ny 24 jona teo ny fe-potoam-piasan’ny teo aloha, Andriamifidy Jean-Louis, nefa tsy mbola voatendry hatramin’izao ny hisolo ny toerany. Efa nahavita ny adidiny sy ny andraikitra nankinina aminy ny eo anivon’ny Komity miaro ny fahitsiana (CSI) nanao ny fikarakarana sy ny fijerena ny antontan-taratasy ho an’ireo nirotsaka hotendrena amin’izany. Anisan’ny anjara andraikitra nankinina taminy ny nanangana ny komity nifantina ireo ho amin’izany toerana izany. Hatreto, telo ireo hany voafantina farany tokony hotendrena ho tale jeneralin’ny Bianco ka ahitana mpitsara roa sy manamboninahitra ambony iray.
Efa voatendry amin’ny andraikitra hafa any Afrika
Tsiahivina fa anjaran’ny filoham-pirenena ny manendry izany ho tompon’andraikitra voalohany amin’ny ady amin’ny kolikoly izany. Tsy mbola voatendry anefa izany hatramin’izao.
Marihina fa efa voatendry amin’ny toerana hafa any ivelany, hisahana an’i Afrika momba ny ady amin’ny kolikoly, ny tale jeneraly teo aloha ny Bianco, Andriamifidy Jean-Louis.
L’article Ady amin’ny kolikoly: mitarazoka ny fanendrena ny tale jeneralin’ny Bianco a été récupéré chez Newsmada.
Miova tokoa ny endriky ny fanjanahantany amin’izao fotoana. Mampalahelo fa lasa foto-kevi-dehibe ao anatin’ny propagandin’ny sasany io endrika “fanjanahantany vaovao” io ary atao mihitsy izay haneken’ny saim-bahoaka izany. Teratany vahiny na vazaha avokoa ny ankamaroan’ireo niray latabatra tamin’i Andry Rajoelina nandritra ilay IEM voalohany tany Frantsa. Ireo vazaha ireo no hibaiko ny tontolo ara-toekarena sy fandraharahana amin’ny programa IEM kasainy hatao eto Madagasikara. Tsy ho loha-laharana ao anatin’izany na oviana mihitsy ny mpandraharaha Malagasy ary mazava ho azy fa avy amin’ny alalan’izany no hamerenana ireo vola be an’arivony miliara lanin’i Mamy Ravatomanga nandritra ny fampielezan-kevitra sy ny tambin’ireo trano be an-jatony miliara sarona any Frantsa. Aza adinoina fa vazaha manana raharaham-pitsarana amin’ny resaka hosoka ara-ketra avokoa izy ireo, dia ireny vazaha efa maloto any aminy ireny no mitady hanjakazaka aty amintsika amin’ny alalan’ny IEM. Tsy ny tontolo ara-toekarena sy ny fandraharahana ihany anefa no tandindomin-doza ankehitriny. Tafiditra ao anatin’ilay “fanjanahantany vaovao” amin’ny programa IEM ihany koa ny Foloalindahy. Nasehon’i Andry Rajoelina mivantana teny amin’ny CCI Ivato mihitsy izany. Niantso vazaha hanome lesona ny Folaolindahy ity “jeune putschiste” ity dia izany Assaf Yariv, Franck Reigner, Dominique Duval, Phillipe Coste ary Berge Cottrant izany niampy ireo jeneraly “putschiste” roalahy niara-dia taminy nandritra ny fitondrana HAT. Efa nasehon’i Andry Rajoelina rahateo moa ny fanaovany tsinontsinona ny Tafika Malagasy ny faha-26 Jona farany teo. Ny tenany irery no tsy hita teny Mahamasina kanefa teto Madagasikara izy tamin’izany. “Fanjanahantany vaovao”, izay no azo andikàna ny IEM. Tsy ny sehatra ara-toekarena irery ihany fa hatramin’ny tontolon’ny Fiarovam-pirenena mba hifehezan’i Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga tanteraka ny fiainam-pirenena, hanonerana sy hangoronan-karena. Tandindomin-doza ny firenena, hiditra amina “fanjanahantany vaovao” indray isika rehefa avy nivoaka tamin’ny krizy nateraky ny fanonganam-panjakana. Masoivoho L’article «Fanjanahantany vaovao!» est apparu en premier sur .L’article «Fanjanahantany vaovao!» a été récupéré chez Triatra.
HCDDED : “Mila fanazavana ny momba ny Covid-19”
Naneho ny heviny amin’izao fiatrehana ny ady atao amin”’ny covid-19 izao ny eo anivon’ny Filankevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna (HCDDED). Mitaky mazava ny momba ity valanaretina izy ireo.“Voateny hatrany ta­to ho ato ny mo­mba io valanaretina io. Satria misy olona tsy mahafantatra akory ny mo­mba azy io, ary tsy mino ny fisiany. Izay ny mahatonga an­tsika ho sahirana. Misy indray ny mahafantatra fa tsy milaza ny marina” hoy ny filohan’ny HCDDED, i Na­vo­ny Pierre Lenoble, ma­noloana ny fiatrehana ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 amin’izao fotoana izao. Koa miantso ny namampahaizana manokana momba io valanaretina io hanazava amin’ny haino aman-jery mi­sy eto an-toerana izy. Mi­te­raka fikorontanan-tsaina eo amin’ny fiarahamonina ny fisian’ny valanaretina hoe ka­ra­zany na andiany faharoa, fahatelo… Izay mahafantatra mo­mba ny valanaretina ny miteny sy manazava fa izay tena manampahaizana manokana. Mba hahazoana miatrika ny ady amin’io valanaretina io izay.Tsy fanaovana andrana vaksiny ny Malagasy “Tsy tokony hanana fihetseham-po ny fitondram-panjakana amin’io raharaha io fa tokony hojerena ny fahasalamam-bahoaka”, hoy izy. Rehefa atao ny fiadiana amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19, miara-mientana ny rehetra na avy aiza na avy aiza, na inona lokony, na inona firehany, na inona finoany, na inona firazany: ampitoviana rehefa tsy mahazo mivorivory, tsy maintsy manao arotava… Entanina amin’izany koa ny tsirairay fa adidin’ny rehetra ny ady amin’io valanaretina io. Samy tomponandraikitra ny rehetra fa tsy ailika amin’ny olona iray ihany, na ny mpitsabo… Aleo vaksiny tena azo antoka ny ampidirina eto Madagasikara fa tsy izay tsy ampy andrana ka aty amintsika no anaovana andrana. Manana ny maha izy azy ny vahoaka malagasy fa tsy fanaovana andrana. Aleo hajanona ny vaksiny rehefa hita fa tsy mety amintsika. Izay azo antoka no omena fa manahirana raha tsy voadinika tsara.R. Nd.L’article HCDDED : “Mila fanazavana ny momba ny Covid-19” a été récupéré chez Newsmada.
Me Razafinjatovo Willy : “Fero ireo ampidirina am-ponja”
“Aoka mba hoferana ny olona ampidirina am-ponja, satria ny fomba fiainana ao mihitsy, sanatrian’ny vava, tsy olombelona intsony fa toy ny biby.” Izay ny fanehoan-kevitry ny mpahay lalàna, ny Me Razafinjatovo Willy, momba ny fampidirana olona am-ponja vonjimaika amin’izao fotoana izao. Tsy misy intsony ny iainana ao am-ponja, na amin’ny ny toerana ipetrahana na ny sakafo ho hanina aza. Izany no hoe famonjana tena atao izay ampangirifiry an’ilay olona. Notsiahiviny filazan’ny filohan’ny Repoblika raha nandalo tany, novambra 2019 fa be loatra ny olona ao am-ponja. Koa tokony hoferana ihany ny olona ampidirina amin’izany ka hojerena izay fa tsy mety. Tsy tokony hampidirina am-ponja izay heloka madinika, ary tsy ampidirina am-ponja avokoa izay mandalo fitsarana.Mitohy ihany ny fampidirana am-ponja Taoriana kelin’izay fitsidihan’ny filohan’ny Repoblika izay, nisy ny fampihenana isa ny voafonja. Nefa taty aoriana, mampiditra ihany ny fitsarana rehefa misy olona mandalo eo aminy. Politikam-panjakana ataon’ny minisiteran’ny Fitsa­rana ny hoe: mba ho vitsivitsy no olona ampidirina am-ponja. Arakaraka ny mpitsara sy ny fahitany izay antontan-taratasin’ady eo an-tanany no anaovany izay fampidirina olona am-ponja izay. “Marina fa mahita ny olona fa efa tsy rariny intsony ny fampidirana olona am-ponja isan’andro: na kely na lehibe, na manahoana ny vesatra ao amin’ny antontan-taratasin’ady”, hoy izy. Misy ny valanaretina Covid-19 amin’izao fotoana izao, nefa afa-mifindra avokoa ny aretina ao amin’ny fonja rehefa misy ny fifampikasohana: raboka, aretin-koditra… Na tiana na tsia, tsy maintsy mifampikasoka fa tsy misy intsony ny toerana ao am-ponja.R. Nd.L’article Me Razafinjatovo Willy : “Fero ireo ampidirina am-ponja” a été récupéré chez Newsmada.
Fitaterana an-dranomasina: havaozina ny 90%-n’ny lalàna
Lany andro ! Efa tamin’ny taona 2000, lalàna 99-028, ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana an-dranomasina eto amintsika. Tsy maintsy mampihatra ny fifanarahana iraisam-pirenena nosoniaviny anefa i Madagasikara. Manao fitsirihana isaky ny fito taona ny Fikambanambe iraisam-pirenena (OMM) ka eo amin’ny fahadimy taonany isika eto Madagasikara izao.Izay no nahatonga ny atrikasa natao, omaly, hankatoavana ny volavolan-dalana vaovao mifehy ny fitaterana an-dranomasina. Eo koa ny asan’ny tantsambo eto an-toerana sy iraisam-pirenena, ny fametrahana rafitra mitantana ny fandraisana lisitra ny tantsambo. Nambaran’ny tale jeneralin’ny Antokon-draharaha misahana ny seranan-tsambo amin’ny fitaterana an-dranomamy sy an-dranomasina (APMF), ny Capitaine de Vaisseau Randrianantenaina Jean Edmond, fa “manodidina ny 90% ny andinin-dalàna hovaina, hifanaraka amin’ny toetr’andro”.Hanome asa ny tantsambo malagasyNomarihiny fa ho azon’ireo sambo vahiny atao ny miasa aty Madagasikara, ka hanome asa ny tantsambo malagasy. Nahatratra 1.600 ny sambo malagasy sy vahiny nivezivezy teto Madagasikara, ny taona 2020, ahitana mpitatitra entana, mpitatitra olona ary mpitsangantsangana. Miisa 9.080 kosa ny tantsambo malagasy am-perinasa.Haroso dinihin’ny minisiteran’ny Fitaterana ity lalàna vaovao ity, handalo eny amin’ny filankevitry ny governemanta sy ny minisitra, ary ho hankatoavin’ny antenimiera roa tonta amin’ny fivoriana ara-potoana voalohany, amin’ny volana mey 2021 ho avy izao.Tsy voakasik’ity sata vaovao ity kosa ny fitantanana ankapobeny ny lafiny an-dranomasina, fa hanana ny lalàna mifehy azy manokana.Njaka A.L’article Fitaterana an-dranomasina: havaozina ny 90%-n’ny lalàna a été récupéré chez Newsmada.
Ranesa Firiana : “Tsy tokony hosakanan’ny antoko ny mpifidy vaventy”
“Raha fifidianana tsy handraisan’ny rehetra anjara, tsy mipetraka velively ny baiko na ny fitsipiky ny antoko. Satria solontenam-bahoaka ireo mpifidy vaventy ary ny vahoaka no nifidy azy ireo. Amin’ny anarany manokana no isoratany sy anoratana azy ao amin’ny lisitry ny mpifidy” hoy ny mpahay lalàna, Ranesa Firiana.Noho izany, na misy aza ny baikon’ny antoko manentana amin’izay tsy fandraisana anjara amin’ny fifidianana izay: tsy antony ahazoana manala mpifidy vaventy iray ao anatin’ny antoko na ny lisitr’izay antoko izay ny fandraisany anjara amin’ny fandatsaham-bato amin’io fifidianana loholona io.Na mpifidy vaventy iray ihany aza no mifidy ny kandidà amin’ny fari-pifidianana iray tsy misy afa-tsy kandidà tokana: voafidy avy hatrany izany kandidà izany. Endrika fisian’ny demokrasia sy ny fahalalahana maneho hevitra ny filazan’ny antoko politika na tsy handray anjara amin’izany fifidianana izany.Tsy tokony hosakanana ireo mpifidy vaventy manao ny adidiny amin’ny fandatsaham-bato, na avy amin’ny mpanohitra aza. Satria natao hisolo tena ny vahoaka eny ifotony izy ireo amin’ny fifidianana loholona, fa tsy hisolo tena ny antoko politika misy azy.R.Nd. L’article Ranesa Firiana : “Tsy tokony hosakanan’ny antoko ny mpifidy vaventy” a été récupéré chez Newsmada.